USALGA usenobudlelwano nabezemfundo ephakeme - Bayede News
Kuthiwa umgolo udla lubi komasipala
UKUZE kwenziwe ngcono isimo sokuphatha kohulumeni bendawo eNingizimu Afrika, iSouth African Local Government Association (SALGA) Centre for Leadership and Governance (SCLG), okuyisikhungo sokuqeqesha esingaphansi kukaSALGA isiyakhe ubuhlobo neNyuvesi yaseWitwatersrand (Wits University) ukuze kuqeqeshwe abaholi ezingeni likaHulumeni Wasekhaya ezifundweni ezikhethekile. Lobu budlelwane buqale ngowezi-2015 ngesikhathi isikhungo iSCLG sibona isidingo sokusebenzisana nezinkampani ezizimele nalezo zikahulumeni ezinezinhloso ezifanayo nezesikhungo sikaSALGA. Kwabe sekuphuma isikhangiso sokwenza isicelo sokuhlanganisa izifundo eziphathelene nobuholi.
INyuvesi yaseWits yasheshe yayemukela inselelo yahlanganisa izifundo ezimayelana nobuholi ekuphathweni komasipala eyazibiza ngeLeadership in Municipal Governance Programme. “Isikhungo esiqeqesha abezokuphatha iWits School of Governance sabe sesihlongoza izifundo ezinesisindo esihloliwe nathi sanikezwa ithuba lokwakha ubudlelwane obuncike kulokho okuvunyelwana ngakho nhlangothi zombili njengokuyizidingo ezimqoka zokwesekela lo mkhakha,” kusho imeneja eyengamele izifundo uKubeshni Govender-Jones. NgoNdasa walo nyaka kusayindelwe ngokusemthethweni ubudlelwane phakathi kwalezikhungo. Izifundo zokuphatha ezingeni lomasipala ezibizwa ngeLeadership in Municipal Governance Programme ziwuhlobo lokuqeqeshwa nokuthuthukiswa okusezingeni lobuchwepheshe obungajwayelekile nobuseqophelweni eliphezulu kwabasezingeni lobuholi bomasipala.
Isitiﬁketi esinikezwa asebephothule izifundo siseqophelweni leNQF Level 7 kanti izinga lokuqeqeshwa liphendula ngqo izidingo zohulumeni bendawo. “Ngenxa yomlando omuhle kwezokuqeqesha nokujula kwezifundo ezinikezwa yisikhungo, iWits School of Governance yakhethwa ngo- “elethu” ukuba ngabalingani bethu kulolu hlelo,” kuqhuba uGovender-Jones. “Abaholi bomasipala bazozuza kakhulu ngalezifundo, baphume nolwazi olujulile nolusabalele ngalokho okudingwa wumuntu osesikhundleni sokuphatha ezingeni likahulumeni wasekhaya.” Izindleko zezifundo zithwalwa wuSALGA. NgoNdasa bekulindeleke ukuthi kuqeqeshwe izithunywa ezingama-270 ezihlanganisa izimeya, osomlomo, izimeneja nozihlalo bamakomidi. Baqeqeshwa ngokujulile ezifundweni ezithinta inqubomgomo, ukuhlela, ubuholi, umnotho wendawo, nokuqapha izinhlelo namafa kamasipala. Okuqukethwe wumthamo wezifundo kusezingeni lezifundo ezethulwa yizikhungo zomhlaba ezifana neBhange Lomhlaba nelezeNtuthuko laseNingizimu Afrika.
Uhlelo alujwayelekile ngoba lubhekele izidingo zalabo abazoqeqeshwa nezikamasipala. Ngaphezu kokuhlolwa kokugcina,kuba nokuxoxisana nabaqeqeshwayo bese kuphunywa nohlelo oluya phambili olufanelene nomuntu ngomuntu. Lolu hlelo lunezinhloso zokuqeqesha abaholi bezindawo abayizi-2000 eNingizimu Afrika nakuSouthern African Development Community (SADEC). Inhlosongqangi wukuletha uguquko kwezokuphathwa komasipala ukuze babe yizindawo zokufunda, ukusombululwa kwezinkinga, ukulinga amasu amasha, ukufunda kwabenza kahle nokudluliselwa kolwazi kulabo abaludingayo. UGovender-Jones uthi lolu hlelo luhambisana ncamashi nokwenziwa umhlaba wonke, “ukubalekelana nalokho okujwayelekile okunikezwa yizikole eziqeqesha abamabhizinisi, nokusungula izikhungo ezisezingeni eliphezulu ngaphakathi enhlanganweni leyo ezizokwazi ukuhlanganisa izifundo ezibhekele izidingo zomuntu ngomuntu.” Olunye uhlelo lwezifundo lesi sikhungo oluziqhayisa ngalo lubizwa ngeCertiﬁcate Programme in Development and Management (nalo olwasungulwa ngokubambisana nesikhungo iWits). Izithunywa zomasipala zanikwa imifundaze yalolu hlelo lwezifundo ezinikeza umuntu ulwazi zimfundise namasu amasha azomphumelelisa ebuholini bamanje nobesikhathi esizayo.
nguMfo waKwaNomajalimane Aug 3, 2018